ပြင်ပအမြင့်မြန်နှုန်းကြိတ်စက် Shutter ကားဂိုဒေါင်တံခါးကို China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဂိုဒေါင်တံခါး,မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကြိတ်စက် Shutter တံခါး,ပြင်ပကားဂိုဒေါင်တံခါး
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး > ပြင်ပအမြင့်မြန်နှုန်းကြိတ်စက် Shutter ကားဂိုဒေါင်တံခါးကို
ပြင်ပအမြင့်မြန်နှုန်းကြိတ်စက် Shutter ကားဂိုဒေါင်တံခါးကို
မူလအစရာ: ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်
ဆိပ်ကမ်း: Shenzhen Port
မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူလွတ်လပ်သောအစာရှောင်ခြင်းတံခါးကိုကြိမ်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်, ။ ကျယ်ပြန့်အစားအစာကိုဓာတုဗေဒအထည်အလိပ်အီလက်ထရွန်းနစ် supemarket အအေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, သိုလှောင်နှင့်အခြားသောနေရာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ , အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိပန်းကန်ဂဟေဆော်, Anti-ချေးကုသမှုပေါ်လာ, သံချေးရန်လွယ်ကူလှသောအဆင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောမဟုတ်ဘူး။
PRODUCT မှ Pictures
စက်ရုံ & ပြပွဲ
Q1 ။ လစဉ်စွမ်းရည် What`s?
Q2 ။ What`s ပစ္စည်းအရည်အသွေးစံ?
Q3 ။ ငါရဲ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများများအတွက်နမူနာရနိုင်မလား?
Q4 ။ တစ်ဦးချင်းစီအမိန့်အဘို့အနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်ကဘာလဲ?
Q5 ။ ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကဘာလဲ?
ဖြေပုံမှန်အားဖြင့် 7days, အမိန့်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်.
Q6 ။ ငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းကဘာလဲ?
Q7 ။ ဘယ်လိုအာမခံကော?
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
တံခါးကိုဖွင့်ခေါက်မြန်နှုန်းမြင့် PVC အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြီးမားသော szie PVC တံခါးမဖွင့်ကိုလှိမ့် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြန် High Quality စားနပ်ရိက္ခာစက်ရုံ Rolling တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိ Frame ကအတူ PVC ဂိုဒေါင်တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
pvc fold up speed rolling door အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
220V PVC ကိုလှိမ့တံခါးကိုမှတဆင့်ကြည့်ရှု အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
mega လေယာဉ်ရုံအကြီးစား PVC တိုက်ဖျက်ရေးလေ stack တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဂိုဒေါင်တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကြိတ်စက် Shutter တံခါး ပြင်ပကားဂိုဒေါင်တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းသိုလှောင်တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းခေါက်တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းပြည်တွင်းတံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းပြင်ပတံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းအေးသိုလှောင် PVC တံခါး